Maleeshiyaad Hubeysan oo Macalin dugsi Qur'aan ku dilay degmada Wanllaweyn Ee Sh/Hoose.
Shirkii 4aad ee dowladaha Khaliijka oo ka furmay dalka Sacuudiga.
Wednesday August 14, 2019 - 12:43:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay weeraro xooggan oo maanta barqadii lagu qaaday saldhig ay maleeshiyaadka dowladda Federaalka Soomaaliya ku leeyihiin degmada Awdhgeele ee Sh/Hoose.
Wararka ka imaanaya Awdhgeele ayaa sheegaya in ciidamo katirsan Xarakada Al Shabaab ay weerareen saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad katirsan dowladda oo dhowaan halkaas ay geeyeen ciidamo huwan shisheeye ah.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidankada Shabaabul Mujaahidiin ayaa si hordhac ah loogu sheegay in weeraradan oo loo adeegsaday laba kamid ah gaadiid walxaha qarxa lagasoo buuxiyay lagu laayay askar iyo saraakiil farabadan.
Gaariga koowaad ayaa lagu beegsaday iridda saldhigga melleteri waxaana halkaas ku hoobtay ciidamadii ilaalada ka ahaa saldhigga, daqiiqad kadibna gaari labaad ayaa gudaha saldhigga lagu weeraray waxaana halkaas ka dhashay khasaara aad u xooggan.
Ilo wareedyo aan helnay ayaa sheegaya in dhammaan gaadiidkii melleteri ee gudaha saldhigga ku jiray ay burbureen waxaana halkaas ku dhintay tobanaan askar iyo saraakiil ah.